तपाईंलाई कत्तिको निर्वाचन लागेको छ ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः वैशाख २५, २०७४ - साप्ताहिक
तपाईंलाई कत्तिको निर्वाचन लागेको छ ?
स्थानीय निर्वाचन मेरो जन्म हुनुभन्दा अघिदेखि नै भएको रहेनछ, योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के नै हुन सक्छ र ? ढिलै भए पनि निर्वाचन हुन लागेकोमा खुसी छु । स्थानीय निकायमा पार्टी नहेरौं, असल उम्मेदवारलाई भोट गरौं भन्ने मेरो अनुरोध छ ।
जान्हवी बस्नेत, अभिनेत्री
मधेसमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय छ । निर्वाचनमा मेरो ठाउँमा को–को उठ्दैछन् ? भन्ने थाहा छैन । उठ्नेहरू कस्ता–कस्ता छन् ? तिनको योग्यता–क्षमता के कति छ ? भनेर बुझ्न पाएको छैन । त्यसैले दिक्क लागेको छ, अर्थात अहिलेसम्म निर्वाचन लागेकै छैन ।
निर्वाचन हुने पक्का भएपछि बिस्तारै निर्वाचन लाग्दैछ । अहिले म त नेताहरूको राजक्रीडामा रमाउँदैछु र नेपालीहरूको भविष्यप्रति चिन्तित छु ।
डा. राजेश अहिराज, सञ्चारकर्मी
एक लेखक, एक सचेत नागरिकको हैसियतले निर्वाचन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, तर मलाई लाग्नु र नलाग्नुको कुनै अर्थ छैन । यो देश र जनताका लागि आवश्यकचाहिँ हो ।
झमक घिमीरे, साहित्यकार
२० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचन नलाग्ने त कुरै भएन, तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं निर्वाचन नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले चाहिँ दिक्क वनाएको छ ।
माधव नेपाल, सञ्चारकर्मी
लागेर उत्रिसकेको छ र फेरी लाग्दैछ ।
अभिमन्यु निरवी, लेखक
समाचारमा काम गर्नुपर्छ सञ्चारकर्मीलाई त निर्वाचन लाग्नैपर्‍यो नि ।
निमा काफ्ले, सञ्चारकर्मी
१९ वर्षपछि बल्लतल्ल आएको स्थानीय निर्वाचन लाग्ने नै भयो । अझ यो त अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, संविधान र नयाँ संरचना संस्थागत एवं कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो ।
हेमराज भण्डारी, नेता
निर्वाचन हुने नै भयो, हुने भएपछि लाग्ने नै भयो, तर निर्वाचन लाग्ने भएपछि पनि बजारमा रक्सी किन बिक्री भैरहेको होला ?
शारदा थापा, समाचारवाचिका
त्यति लागेको छैन । मनले खाएको कुनै पार्टी फेला पारेको छैन, तर भोटचाहिँ हाल्छु ।
त्यो दिन छुट्टी पाइन्छ, बस त्यति हो ।
डा. प्रयुश न्यौपाने, फिजियोथेरापिस्ट
निर्वाचन हुन्छ भनेर मोरङमा साथीभाइहरूबीच जमघट एवं भेला तीव्र पारिएको छ । म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ, त्यसैले झन लागेको छ ।
निराजन लुइँटेल, व्यवसायी
मलाई चाहिँ जहिले नि निर्वाचन लागिरहन्छ । चलचित्र नै निर्वाचनजस्तो, निर्वाचनचाहिँ चलचित्रजस्तो लागिरहेको छ ।
जगदिश्वर थापा, निर्देशक
यसपालि अलि धेरै लाग्ने भएको छ ।
पार्टीहरूको अवस्था र तयारी हेर्दा निर्वाचन होलाजस्तो लागेको थिएन, तर हुने–नहुने अन्यौलबीच हुने नै भयो । जे भैरहेको छ, राम्रै भइरहेको छ ।
राम पाण्डे, सचेतक
निर्वाचन त होइन, वैशाखमा पानी परेर मौसमले च्यालेन्ज गर्‍यो । त्यसैले दारु लाग्या छ ।
शिव सत्याल, छायाँकार
काठमाडौंको घामपानी र चुनाव उस्तै—उस्तै लाग्छन् । भर गर्न नसकिने । त्यसैले चुनाव खासै लागेको छैन् ।
नेहा घिमिरे, कार्यक्रम प्रस्तोता
रञ्जु दर्शना उठिन्, अब मलाई निर्वाचन लाग्छ ।
अभिनित मल्ल, अभिनेता
मलाई त हरेक रात पार्टी लागेको छ, डिजे जो परेँ । चुनाव आइसकेको हो र ? आएको हो भने
१९ वर्ष पहिले हुनुपथ्र्यो, ढिलो भयो । अब पनि निर्वाचन नलाग्ला त ?
कृष्णभक्त महर्जन, अभिनेता
लागेपछि टन्नै लाग्छ, अहिले नै लागेको छैन । चुनावको दिन नजिकिएपछि धेरै लाग्छ कि ?
नपढेको भए टिकट पाइने रहेछ । आफु पढेको परियो, खल्लो लागिरहेको छ ।
२० वर्षपछि आउन लागेको स्थानीय निर्वाचन हामीलाई त खुबै लागेको छ । बरु निर्वाचन गराउन तम्सिएको सरकार एवं राजनैतिक दललाई कत्तिको लागेको छ ? जनता बुझ्दैछन् ।
सन्दीप सापकोटा, सञ्चारकर्मी
चुनावमा सक्रिय भएर लागेको त छैन, तर चासोचाहिँ छ । नितान्त नयाँ अनुभव लिएर आएको यो निर्वाचनले कौतूहलता थपेको छ ।